Muuri News Network » DAAWO: 400 oo dhalinyaro oo ku dhimatay Badda Masar & Ehelada..
DAAWO: 400 oo dhalinyaro oo ku dhimatay Badda Masar & Ehelada..
Apr 18, 2016 - Comments off
Warar dheeraad ah ayaan ka heleeynaa doomo la shegay in ay ku qalimatay xeebaha dalka masar iyo talyaaniha u dhaxeeya oo ay saar naayeen dad u badan Somali tahriib ahaa.
Dhibaatadan aadka u xanuunka badan ayaa dhacday hameenimadii Axada Mid kamid ah Dhalinyarada ka badbaaday masiibadan oo lagu Magacaabo Cawaale Safiir ayaa sheegay inay ahaayeen 500 oo qof ayna iminka kusoo badbaadeen 23 kaliya intii kalena ay Badda ku geeriyoodeen.
Dhalinyarada Badda ku halaagsamay ayaa Doonta ka raacay Magaalada alexandria ee Dalka Masar waxayna kusii jeedeen Dalalka Yurub si ay nolol ka duwan tii ay ku jireen uga sameeyaan halkaas.
Qaar kamid ah eheladda Dhalinyaradan ku geeriyootay Badda u dhaxaysa Masar iyo Talyaaniga oo wajiyadooda laga dheehan karay murugo xoogan ayaa sheegay inay falkan si aada uga naxeen, Dadkan ayaa Warbaahinta la hadlay iyagoo ku sugan Magaalada Burco.
Sanad walba Boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ku dhinta Bada loo yaqaan Mediterranean, mana jirto talaabo muuqata oo Maamulada ka jira Dalka ay kula tacaalayaan dhibatadan xanuunka badan ee haysata Dhalintii Mustaqbalka u ahayd umadda Soomaaliyeed.